Njikọ Microsoft Teams Google Ads
clever ads Banye na MS Teams
Akwụkwọ Mberede Google Sheets
Banye na MS Teams
Njikọ Microsoft Teams Google Ads , Mgbasa Ozi Microsoft &amp; Facebook Mgbasa ozi
Nata akara ngosi ozugbo na nkata Microsoft Teams
Nwere grafụ mere kpọmkwem maka gị mgbasa ozi akaụntụ.
Ịtọ oge na-enweta gị metrics na ma a kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa izu.
Tinye na Microsoft Teams
Uru nke Clever Ads
Dị ka na-amasị anyị na-ekwu, ị ga-azọpụta oge zuru ezu na-enwe na ụtụtụ kọfị ị hụrụ n'anya nke ukwuu! ☕
Azọpụta gị oge!
Zọpụta oge gị dị oke ọnụ site na ịlele ihe niile dị mkpa gbasara Google Ads , Mgbasa ozi Bing na Facebook Ads metrics n’otu ebe. Mechie ụfọdụ taabụ ndị ahụ!
Hazie gị kwa ụbọchị na-aga-eme ihe rụọ ọrụ nke ọma
Iji ngwakọta a, ịnwere ike iji ọnụọgụ, eserese, na ihe ngosi iji nyochaa ọganihu nke mkpọsa gị, niile site na Microsoft Teams !
Clever Ads , n'adịghị ka ngwaọrụ ndị ọzọ yiri ya na ahịa, achọghị ego maka gị iji ya.
Iyo gị họọrọ ads 'ihe ndekọ na-enweta a arụmọrụ nchịkọta site metrics na grafụ.
Ịchịkwa gị dashboard
Nweta gị dashboard ma nwee ike ịhazi otu ị si enweta usoro gị site na Microsoft Teams . Iyo nke akụkọ ịchọrọ ịhụ, hazie akụkọ gị ma hazie ozi gị .
Kedu ihe kpatara ịwụnye ngwà Clever Ads Microsoft Teams ?
Usoro dị mkpa ga-enweta ozugbo site na Microsoft Teams . Usoro ọnụọgụ ndị a nwere ike ịbụ echiche, pịa, na ndị ọzọ, ihe niile gbasara Google Ads Bing gị.
Jiri a eserese ka anya na-ahụ mmalite nke ọ bụla nke gị metrics. Ma ọ amụta, na-eri, ma ọ bụ akakabarede ọnụego.
Nwere oke na-enweta kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa izu nchịkọta, na-eme ka ha n'ihu ọha gị otu na-ahụ, ma ọ bụ gị anya naanị.
Anyị ga-enye ndụmọdụ maka mmelite maka Google Ads gị Google Ads atụmatụ maka arịrịọ gị. Anyị nwere ike inye ndụmọdụ gbasara mkpọsa gị dịka ịhazigharị mmefu ego ya, ịgbanwe ihe ọ chọrọ, yana ndị ọzọ.
Olee otú ị malitere?
Ihe dị ka otu nkeji, ịnwere ike ịgbakwunye Clever Ads maka Microsoft Teams ozugbo na akaụntụ gị.
Naanị 4 nzọụkwụ
Naanị ihe ị ga - eme bụ pịa bọtịnụ “Tinye na Microsoft Teams ” ma ị ga-enwe ya
Banye na gị mgbasa ozi akaụntụ
Banye na gị Google, Facebook, na / ma ọ bụ Microsoft Account e jikọrọ ya na gị mgbasa ozi akaụntụ
Họrọ akaụntụ gị
Mgbe ị na-ahọrọ gị chọrọ na akaụntụ, na-eche free ka ịgbanwee gaa na ndị ọ bụla ọzọ n'oge ọ bụla
Ahu nagide ọtụtụ atụmatụ nke ngwa ahụ
Anata niile akụkọ kwuru n'elu seamlessly na conveniently
Ị ga-ezi ụlọ ọrụ
Freaking-esi About Ajụjụ?
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ a na-azaghị n'okpuru, ị nwere ike dee anyị na assistant@cleverads.com
Gịnị ka nke a na-eji ngwa-eme kpọmkwem?
Nzube nke a na ngwa bụ iji mee ka ndụ gị a bit mfe na dị ka anyị na-amasị "ịzọpụta gị oge zuru ezu na-enwe na ụtụtụ kọfị ị hụrụ n'anya nke ukwuu." Ozugbo i jikọtara Google Ads ịchọrọ ịrụ ọrụ, ịnwere ike ịmalite ịnweta usoro na eserese na Slack ma ọ bụ Microsoft Teams chat gị naanị site na ide ozi bot. Zọ a, ị na-azọpụta ụfọdụ nke gị dị oké ọnụ ahịa oge dị ka ị na-agaghị na-abanye gị Google Ads interface ọ bụla otu ụbọchị.
Offọdụ n'ime egwu atụmatụ na ngwa nwere na-enye bụ:
Usoro & eserese : Usoro dị mkpa na eserese metụtara Google Ads akaụntụ gị dịka arụmọrụ, ntụgharị, clicks na ọtụtụ ndị ọzọ ga-enweta gị ozugbo na nkata gị.
Emeziri akụkọ : Na-anata usoro metrik gị kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa izu na ọwa gị kachasị amasị gị iji mee ka ha bụrụ ọha na eze maka otu gị ma ọ bụ debe ya n'onwe gị site na ịhọrọ nhọrọ Direct Message.
Ndụmọdụ : Jụọ maka etu esi emezi Google Ads gị niile site na izipu ozi dị mfe. Anyị ga-enwe ike ịtụ aro ihe dịka ịgbakwunye ụdị mkpọsa dị iche, ịhazigharị usoro mkpọsa, ma ọ bụ imezigharị atụmatụ mkpọsa ahụ.
NA - AB AleA ỌR AleA NA-AH AleA : Na-echekwu nchekwa na akaụntụ Google Ads Clever Ads 'Ntanetị' bot ga-agwa gị ma ọ bụrụ na enwere ihe ọhụụ na-eme na akaụntụ gị.
Gịnị bụ price?
Ngwa bụ 100% free!
Kedu ihe kpatara m jiri jikọta Google Ads m Google Ads akaụntụ?
Iji ngwa ahụ na-agba ọsọ nke ọma, ọ chọrọ data sitere na akaụntụ Google Ads Maka ebumnuche nchekwa, Google anaghị ekwe ka onye ọ bụla hụ metrik gị na ndabara, yabụ anyị chọrọ ikikere gị. Anyị na-achọ ọkwa dịkarịsịrị ala nke Google Ads gị nke akpọrọ "Jikwaa Adwords gị." Nke a bụ naanị ụdị ikike anyị chọrọ naanị ịhapụ anyị ka anyị lelee usoro metrik gị ma mepụta eserese na nchịkọta.
Ọ dị mma Google Ads m Google Ads akaụntụ?
Ọ dị mma 100%! Clever Ads bụ Onye Mmekọ Google. Iji nweta aha a, anyị ga-enwerịrị ụkpụrụ na njirisi kachasị elu nke Google. Ngwaahịa dị iche iche anyị mepụtara kemgbe ọtụtụ afọ eguzobela aha ọma n'etiti azụmahịa 150,000.
Olee otú m data echebe?
Ozugbo ị banyere na akaụntụ Google gị, anyị na-echekwa akara ngosi nnweta na nchekwa data anyị ezoro ezo. Igodo bụ naanị Clever PPC API ji arụ ọrụ ma anaghị eso Slack ma ọ bụ Microsoft Teams kerịta ya. Mgbe anyị nwetara data dị mkpa sitere na Google Ads , anyị na-agbanwe ya ka ọ bụrụ ozi Slack ma ọ bụ Microsoft Teams , ma anyị zigara ya na otu mkparịta ụka ahụ ị dere iwu na ya.
Ozi ọ bụla ma ọ bụ nke dị n'ime ma ọ bụ nke Google, Slack , ma ọ bụ Microsoft Teams ka ezoro ezo site na iji TLS 1.2 (Transport Layer Security). Anyị na-enweta saịtị naanị na protocol HTTPS. Site na njedebe anyị, anyị nwere ike ịnweta ọnụọgụ Google Ads gị ebe ị nyere anyị ikike ime nke a. N'enyeghị ọnọdụ ọ bụla, a na-ahapụ anyị ka anyị jide data na-abụghị akụkụ ndị a kwuru.
Ị na-enwe nsogbu ọ bụla na iji ngwa?
Nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na iziga email na assistant@cleverads.com ma ọ bụ site na ịdejupụta ụdị ndị a:
Daalụ! Anyị natara ozi gị!
Oops! Ihe mebiri. Biko gbalịa ọzọ.